Kedu ihe mmiri ozuzo nke azụ na awọ na-eme. | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe okike egbochighi mmadu ijuanya site na mmalite. Oke ihe omuma Nke ahụ ga-ahapụ gị ka ịmeghe ọnụ gị na ihe omume kachasị ịtụnanya. Mmiri ozuzo nke azụ na frogs Ọ bụ ihe ịtụnanya nke malitere n’afọ 200 AD. C ma kemgbe ahụ ụfọdụ n’ime ha emeela nke mere ka ọ ju gị anya. Ọ bụ ezie na mmiri ozuzo na azụkarị awọ, froms na ọbụna ụmụ oke enwewokwa. Enwere ndị chịkọtara ya na mmiri ozuzo anụmanụ, ebe ọ bụ na ị maghị ebe ịtụnanya ahụ ga-esi pụta.
Na nke a, anyị ga-agwa gị ihe nzuzo niile ihe ịtụnanya ndị a na-ezo na ihe bụ mmalite. Youchọrọ ịchọta eziokwu n’azụ mmiri ozuzo nke azụ na mbàrá? Nọgide na-agụ ka ịmatakwu.
1 Eziokwu nke obodo ma ọ bụ akụkọ mgbe ochie?
2 Ezigbo mmiri ozuzo anụmanụ
3 Jiri ihe omume ahụ mee ihe
4 Nkwupụta Azụ na Frog Mmiri ozuzo
Eziokwu nke obodo ma ọ bụ akụkọ mgbe ochie?
Iche na ụmụ anụmanụ na-ezo mmiri ara ara bụ nzuzu. E nwere ndị na-ekwu na ụdị mmiri ozuzo a bụ ihe si n’aka Chineke. Dị ntaramahụhụ sitere n'aka Chineke (ma ọ bụ chi) ndị na-achụpụ anyị iji kpuchie mmehie anyị. Ndị ọzọ nwere obi abụọ Ha na-enwe obi abụọ ịdị adị nke mmiri ozuzo a ma ha ekwenyeghị na ya. Nsonaazụ mgbasa ozi okpukpe na okwu banyere nrubeisi nye Chineke ma ọ bụ nkwupụta nke njedebe nke ụwa nwere ike bụrụ ihe kpatara ụdị nchepụta ahụ.
Otú ọ dị, e nwere ezigbo ihe akaebe na ihe àmà na-egosi na mmiri ozuzo nke azụ na frogs dị. Na 1997, onye okomoko nke Korea tufuru site na squid oyi kpoo Nke ahụ siri n’eluigwe bịa N'ịbụ onye ọdịda dị otú ahụ chere ihu, ọ na-eburu ọsọ ọsọ ma na-akụsi isi ike, na-eme ka ọ daa ozugbo. Onye ọkụ azụ azụ amaghị ihe ụbọchị abụọ ahụ wee daa ụbụrụ ụbụrụ. Ya na ndị otu ya na ya kwuru na ọbụghị onye a wakporo ma ọ bụ na ya nwere azụ ọ bụla n'ime nri Ọ dịghị onye nwere ike ịkọwa ihe kpatara squid ahụ oyi kpọnwụrụ nwere ike isi n’eluigwe daa.
Ọ bụkwa na mmiri ozuzo ụmụ anụmanụ a abụghị akụkọ ifo ndị mepere emepe ka a na-asị ha. Enwere otutu ihe akaebe edere nke oma nke gosiputara eziokwu. Otu okwu pụrụ iche a na-ese ihe nkiri mere na 2013. Otu nwata nwoke onye Brazil na-anya ụgbọ ala ya mgbe, na mberede, Ọtụtụ puku ududo bidoro si n’eluigwe daa n’isi ya. Ihe omume a mere ka ọtụtụ ndị mmadụ ghara inwe ike ikwu okwu, ndị na-enweghị ike ịkọwa ya, n'amaghị etu o si mee.
Ọzọ omume gwa ke New York Times O mere mgbe ụgbọ mmiri azu nke Russia mikpuru n'ihi na onweghị ihe ọzọ na obere ihe ehi dapụtara si na mbara igwe. Kedu ihe ehi na-eme n'igwe?
Ezigbo mmiri ozuzo anụmanụ
Nsogbu nke ihe ndị a na-adịghị ahụkebe na ndị na-adịghị ahụkebe bụ na ọ jupụtara na echiche efu nke akwụkwọ na enwere ọtụtụ hoax na ịntanetị banyere okpukpe. Onye ọka iwu Greek bụ Athenaeus kwuru okwu banyere oriri nke ndị ọkà mmụta mere na 200 AD. Ọ bụ ihe mbụ na-egosi na anyị nwere banyere ihe omume a pụrụ iche. Na oriri a, o mesiri obi ike na ha nwere ụbọchị 3 na mmiri ozuzo azụ. Na mgbakwunye, na Peloponnese enwere akụkọ ebe ekwuru na ha dị a iju mmiri nke mbàrá.
N'oge na-adịbeghị anya, na 1578, a na-azọrọ na na Bergen (Norway) kporo oke mmiri ozuzo di omimi. Amaghi m nke kacha njọ na mmiri ozuzo atọ a. M ga-ahọrọ oke, ebe ọ bụ na e mesiri ha obi ike na-ebute ọrịa.
Na 1870, na Pennsylvania, ọ mere otu nnukwu mmiri nke ejula n'elu obodo Chester. Ọtụtụ bụ ejula nke na ha kpọrọ ihe omume a "oke ifufe n'ime oke mmiri ozuzo ka ukwuu." Na 2007, edere ịsa jelii na obodo Bath.
Ọtụtụ ihe mere n'oge na-adịbeghị anya mmiri ozuzo nke ikpuru na ikpuru na Louisiana na 2007, Scotland nwere otu ihe ahụ mgbe egwuregwu bọọlụ na-eme na 2011 nakwa na Norway na 2015. Ihe omume ndị a niile edere bụ ihe akaebe a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ịdị adị nke mmiri ozuzo a.
Ọ bụ ezie na mmiri a dị iche iche, nke kachasi ike bụ awọ na azụ. Mmiri ozuzo nke frogs emeela na Gibraltar na 1915, na Nafplio na Serbia na 1981. witnessesfọdụ ndị akaebe nke mmiri ozuzo a na-ekwusi ike na ọbụna mbàrá ndị ahụ adịghị ka nke ala ahụ. Dịka ọmụmaatụ, site na mmiri ozuzo nke mere na Serbia, onye akaebe mesiri obi ike na ọ nweghị ụmụ mbe nke nwere agba ndụ ndụ, kama na ha na-acha ntụ ntụ nakwa na ha na-adị ngwa ngwa.
Jiri ihe omume ahụ mee ihe
Odi obodo di iche-iche nke n’eri udi udiri anumanu anumanu dika onyinye sitere n’elu-igwe. Na Sri Lanka na 2014, a na-asa mmiri nke azụ na ụlọ na n'okporo ámá nke obodo ahụ. Ndị obodo ahụ jiri onyinye ahụ mee ihe ime ememme azụ nke karịrị iri ise n'arọ. A chịkọtara azụ̀ ndị lanarịrị ọdịda wee bụrụ nri.
Na mba ndị ọzọ dịka Yoro (Honduras), kwa afọ site na Mee ruo Julaị, a na-atụsi anya nnukwu owuwe ihe ubi ahụ sitere n’eluigwe ike. Ma nke ahụ bụ enwere ọbụna ememme iji cheta mmiri ozuzo azụ a. Ihe iriba ama na ihe di egwu a gha eme bu oke igwe ojii nke g’eme ka oke ikuku nke anumanu. Mmiri ozuzo a dị ebube ndị bi na ya na-esi nri ma na-eri nri n’obodo.
Nkwupụta Azụ na Frog Mmiri ozuzo
Dịka ihe niile (ma ọ bụ ihe niile) na ndụ a, ị ga-akọwa ya. Nkwupụta nke na-eme ka a mata uche dị adị banyere mmiri ozuzo ụmụ anụmanụ a bụ nke ahụ ụfọdụ oké ifufe na-amịrị ma na-ahapụ ha n'ala, na-eme njem dị anya.
Ozizi ekwenti ezighi ezi dika oke iwe nke Chineke, nkpali nke ndi ozo n’eme ka ewepu nri ozo tupu ha agaa na uwa ozo. Na usoro ifufe a na-ekwu na ụfọdụ anụmanụ na-adị ndụ na ifufe ndị a, ndị ọzọ na-echi ọnụ n'ala site na nrụgide na ike nke ifufe na ndị ọzọ, n'ihi obere okpomọkụ na-eme na elu, na-agwụ oyi.
N'uche m, ụfọdụ ikpe dịpụrụ adịpụ dị ka squid oyi kpọnwụrụ nwere ike ịbụ nsonaazụ nke ụfọdụ ndị pranksters nwere ike ịga obere ụgbọ elu. Maghị ihe mmadụ dị njikere ime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Mmiri ozuzo nke azụ na frogs
Igwe kpakpando Cassiopeia